Waxa la sheegay in dds ay caruur yar ayr oo aan da’adoodu gaadhin in doorashada ay ka qayb qaataan ay codadkooda ka dhiibteen doorashadii halkaasi ka dhacday – ዜና ከምንጩ
Gudiga xuquuqal insaanka ee itoobiya ayaa sheegay in doorashadii doorka labaad ee 20kii bishii meskerem ee uu xafiiska gudiga doorashooyinka ee itoobiya soo diyaariyay gaar ahaana uu dds ka qabtay in caruur yar yar oo aan da’adoodu doorashada gaadhin ay ka qayb qaateen doorashadi oo codadkooda ay ka dhiibteen.
Waxaana la sheegay in gudiga xuquuqal iinsaanka ee itoobiya oo goob jog ka ahaa doorashadii ddsda ka dhacday ee 20kii bishii meskerem ay ku arkeen caruur yar yar oo aan da’adoodu gaadhin in ay doorashada ka qayb qaataan oo goobo doorashooyin kala duwaan oo deegaanka ka mid ah ay codadkooda ka dhiibteen ayaga oo sita waraaqihii lagu codeynayay.
Sida uu ugu waramay wargaysk addis maleda Gelaawdhiyoos oo ah xirfadle dhinaca doorashooyinka ah wareegi labaad ee doorashada in caruur yar yari ay kaadhadhkii doorashada qaateen oo ay ka qayb qaateen doorashadii oo ay arintaasina indhahooda ku arkeen goob joogayaashi ka socday xafiiska xuquuqda aadamaha ee itoobiya in ay sheegeen. Dhibaatadaasi in kasta oo lagu arkay deegaano kala duwan oo kale hadana waxaa si balaadhan loogu arkay buu yidhi ddsda.
Waxa xusid mudan in hada ka hor uu xafiiska gudiga doorashooyinka ee qaranku uu war bixintiisa uu soo saaro iyo tababarada uu bixiyay uu ku sheegay in ay doorashada ka qayb qaadan karayaan oo kaliya dadka ay da’adoodu ka sarayso 18 jirka. Sida uu sheegay xafiiska xuuqal iinsaankuna ayaa ah in dhibaatadaasi ay dhacday doorashada ka hor xiligii loo diyaar garoobayay doorashada oo markii dadka codadkooda dhiibanaya ee doorashada kaadhadhka loo qaybinayay in si sharci daro ah kaadhadhka loogu qaybiyay caruur yar yar oo aan da’adoodu gaadhin in ay doorashada ka qay qaatan.
Waxa uu xafiiska xuquuqal iinsaanku uu war bixintiisi uu gudbiyay xafiiska gudiga doorashooyinka, warbixintaasa ayaa sheegaysay in xiligii doorashadu ay socotay waxyaabihi ay goob joogayaashu arkeen oo dhan. Waxa kale oo uu soo gudbiyay xafiisku xog muqaal ah oo tusinaysa xiligii doorashadu ay ka socotay goob doorashooyinka qaar ka mid ah ee deegaankaasi in caruur yar yar oo aan da’adoodu gaadhin in doorashada ay ka qayb qaatan oo codadkooda dhiibanaya.
Arinta la xidhiidha doorashada ee deegaanka soomalidu waxa ay bilawgiiba ahayd mid murugsan, sidaasi darteed doorashada deegaankaasi jadwalkii ahaa in 14kii sane 2013kii la qabto doorashada ayaa loo badalay in la qabto meskerem 20keeda 2014kii, dhibaatooyinka ka jiray halkaasi oo la xidhiidhay kaadhadhka loo qaybinayay dadka cod bixiyayaasha ah ayaa waxa cabasho ka soo jeediyeen xisbiyadii siyaasadeed ee kale oo rabay in ay doorashada ka qayb qaataan, waxaana ay sheegeen in kaadhadhkii xafiiska gudiga doorashooyinku uu deegaanka uu qaybiyay in uu xisbiga barwaaqo si sharci daro ah uu qaybiyay.
Waxa la ogsoonyahay in uu xafiiska gudiga doorashooyinku uu dhibaatooyinki la sheegay ee xiligaasi ka jiray deegaankaasi in uu soo hubsaday oo uu yidhi waxa lagu sameeyay dib uu habayn, hase ahaate doorashadii ka dhacday deegaankaasi aanay ka qayb qaadanin xisbiyadi siyaasadeed ee kula loolamayay xisbiga talada haysta doorashada. Waxa kale oo xusid mudan in xisbiyada siyaasadeed ay sheegeen sababta ay doorashada uga qayb qaadan waayeen sababahii la xidhidhay u diyaargarawgii doorashadii wareegi kowwad dhibaatooyinkii la sheegay in ay deegaankaasi ka dhaceen oo aan xafiiska gudiga doorashooynku xal uu helin.
Waxa kale oo xusid mudan in xafiiska gudiga doorashooyinka qaran uu doorashadii ka dhacday ddsda 20kii bishii meskerem uu shaaciyay cida ku guulaysatay doorashadaasi. Waxaana ay xaqiiqadu ay ahayd in xisbiga barwaaqo ee deegaankaasi ayada oo aan xisbi kale la loolamin in uu doorashada kaligiis ka qayb qaatay oo uu ku guulaystay, todobaadkii aan ka soo gudubnayna waxa uu qabsaday deegaanku munaasabad dhisida dawlad cusub. Waxaana uu madaxwaynaha deegaankaasi uu doortay Mustafe Muxaumed.
Waxa ay dawlada cusub ee ddsda laga dhisayna ay sheegtay in ay ka qayb galisay goolaha laba qof oo ka tirsan xisbigii doorashada ka baxay ee jabhada wadaniga ah ee xoraynta ogaadeniya (jwxo), hase ahaate xisbigu waxa uu barihiisa bulshada ku soo qoray in labada qof ee laga qayb galiyay goolaha aanay matalaynin xisbigooda.
Total views : 6982967